ကွန်း (Kun) | Moep1's Blog
ဦးဇော်မင်း ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် မေ ၂၀၊ ၂ ၀၁၀ခုနှစ်)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းသည် မေ ၁၈ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ကိုးမိုင်ခန့်အကွာ ကွန်းချောင်းပေါ်တွင် အမှတ်(၃)တည်ဆောက်ရေးက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကွန်းချောင်း ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိရာ စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ တည်ဆောက်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနေ၀င်းသိန်းက ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန်နှင့် ရေထိန်းမျှော်စင်လုပ်ငန်း၊ ပင်မတမံလုပ်ငန်း၊ ရေပိုလွှဲလုပ်ငန်းနှင့် ရေယူအဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ် ဖောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ချဉ်းကပ်ဥမင်လိုဏ် ဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု၊ ရေလျှံထိန်းစည်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ဖိအားမြှင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း တပ်ဆင်ပြီးစီးမှုနှင့် ကျန်ရှိမှု၊ ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ၀န်ကြီးက လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်ကာလများအတွင်း အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ စနစ်တကျသုံးစွဲရေး၊ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် စီမံကိန်းဝင်းအတွင်း စနစ်တကျရှိရေး၊ အထူးဂရုပြု ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ထားရှိရေး စသည်ဖြင့် မှာကြားသည်။
ထို့နောက် ၀န်ကြီးသည် စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်ရှုရပ်မှ ပင်မတမံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု၊ ရေထိန်းမျှော် စင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုနှင့် ရေယူအဆောက်အအုံ Leading Channelူ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု ကိုလည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ဖိအားနိမ့် သံမဏိပိုက်လိုင်း တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ရေပိုလွှဲ ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်နှင့် ချဉ်းကပ် ဥမင်လိုဏ် RD (1581m) ၌ တိုးလျှိုပေါက်ဖောက်လုပ်ပြီးစီးမှု (Break Through Point)နှင့် ကွန်ကရစ်လိုင်နင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လုပ်ငန်းခွင်ရှုရပ်မှ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု၊ ဖိအားမြှင့်သံမဏိပိုက်လိုင်း Trifurcation သံမဏိပိုက်တပ်ဆင်နေမှု၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွင်း စက်မှု၊ လျှပ်စစ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် Unit (1) SpiralCasing လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု တို့ကို လည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ဦးဇော်မင်း ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ကွန်း (Kun)	| Permalink
Electric Power No. 1 Minister inspects dam projects
(NAY PYI TAW, 26 Dec, 2009)
Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min, on 24 December, inspected Kunchaung Dam Project and gave necessary instructions.
The project being implemented by Construction No.3 is located about nine miles to the south-west of Pyu in Toungoo District. The minister also inspected Shwegyin Dam Project near Kyauknagar village, about six miles to the northeast of Shwegyin in Bago Division. The minister heard reports on progress of work and called personnel concerned for timely completion of the project.
Comments Off on Electric Power No. 1 Minister inspects dam projects	| ကွန်း (Kun)	| Permalink
ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း မြင်ကွင်းများ
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ပိုမိုထုတ်လုပ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတော်၏ နေရာအနှံ့အပြားတွင် တိုးချဲ့ တည်ဆောက်နေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထုတ်ယူပြီးသော ရေများကိုလည်း အလဟသမဖြစ်စေဘဲ စိုက်ပျိုးမြေများသို့ ရေပေးဝေနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ တည်ဆောက် နေသော ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူခရိုင် ဖြူးမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ကိုးမိုင်ခန့်အကွာ ကွန်းချောင်းပေါ်၌ တည်ရှိသည်။ ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတည်ရှိရာ နယ်မြေသို့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းဆောင်းပါး ရေးသားရေးအဖွဲ့ သွားရောက်ခဲ့ရာ စီမံကိန်း လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးရဲမြင့်ထွန်း၊ လက်ထောက် အင်ဂျင်နီယာ ဦးအောင်ကိုမြင့်၊ ဒု-ဦးစီးမှူး ဦးရဲဝင်းထွန်း(မြို့ပြ)တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ရှင်းလင်းပြသကြသည်။
ကွန်းချောင်းသည် ပဲခူးရိုးမမှ စီးဆင်းလာပြီး ရေစီးသန်သော ချောင်းကြီးဖြစ်၍ နောက်ဆုံး စစ်တောင်းမြစ်ထဲသို့ စီးဝင်သည်။ ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်တွင် စတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်သော ဘက်စုံစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည် –
(၁) ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို နိုင်ငံတော်ဓာတ်အား
ကွန်ယက်စနစ်မှ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးမည်။
(၂) စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း လွင်ပြင်၏ ဒေသအလိုက် ရေလွှမ်းမိုးမှုကို ကာကွယ်ပေးမည်။
(၃) စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း၊ ကညွတ်ကွင်း၊ ပဲနွယ်ကုန်းဒေသများအတွင်းရှိ လယ်မြေများသို့ သီးထပ်သီးညှပ်
စိုက်ပျိုး နိုင်ရေးအတွက် ဆည်ရေ ပေးဝေမည်ဖြစ်သည်။
ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေလှောင်တမံ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း၊ တမံရေပိုလွှဲလုပ်ငန်း၊ ရေထုတ်ပြွန်နှင့် ရေထိန်းမျှော်စင်လုပ်ငန်း၊ ရေ၀င်အဆောက်အအုံလုပ်ငန်း၊ ဖိအားမြှင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြီး ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ရေလွှဲဆည်လုပ်ငန်းနှင့် ဆည်ရေသောက်စနစ် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။
ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ် ဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မျက်နှာနှစ်ဖက်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပေ ၄၃၄၀ တူးဖော်ပြီး ဖြစ်သည်။ တူးဖော်ပြီး ဥမင်လိုဏ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီး ရေလျှံထိန်းစည် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းကို ၃၈၅၃ ကျင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ မြေကြီး ကျောက်သားတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ကျင်း ၁၅၄၅၃၀ ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပင်မတမံ ပြီးစီးမှုမှာ ၉၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရေပိုလွှဲလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုမှာ ၇၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရေယူအဆာက်အအုံ လုပ်ငန်းမှာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်လုပ်ငန်း ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရေလျှံထိန်းစည် လုပ်ငန်း ၉၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဓာတ်အားပေး စက်ရုံလုပ်ငန်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်၍ စီမံကိန်စတစ်ခုလုံး ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်း ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
ဦးစီးအရာရှိများက ရှင်းလင်းပြသရာတွင် တမံမှ သိုလှောင်ထားသော ရေကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူရန် အတွက် ရေယူအဆောက်အအုံမှ ဖိအားနိမ့် သံမဏိပိုက်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်သို့ ၀င်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဖိအားမြှင့် သံမဏိပိုက်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် စက်ရုံသို့ ရောက်ပြီး တာဘိုင် မဂ္ဂါဝပ် ၂၀x၃ လုံး (မဂ္ဂါဝပ် ၆၀) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ ထုတ်လုပ်မည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၁၉၀ ကို မဟာဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပို့ပေးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ဖြန့်ဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ဘက်စုံ စီမံကိန်း တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအတွက် မျှော်လင့်နေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အလင်းရောင် များနှင့်အတူ တောင်သူများအတွက် စပါးနှင့် သီးထပ်သီးညှပ်သီးနှံများ ပိုမို၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Comments Off on ကွန်းချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း မြင်ကွင်းများ	| ကွန်း (Kun), ဆောင်းပါး (Article)	| Permalink
ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၀၉)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက် (၉)မိုင်ခန့်အကွာ ကွန်းချောင်းပေါ်တွင် ရေအား လျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၃) တည်ဆောက်ရေးက တည်ဆောက်အကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး မြေသားများ ကျောက်များ ဖို့၍ စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် ကြိတ်နေမှု၊ အရည်အသွေး စမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရေပိုလွှဲ တည်ဆောက်နေမှုနှင့် ရေလျှံထိန်းစည် တည်ဆောက် နေမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ထို့နောက် ၀န်ကြီးသည် ရေယူဥမင်အ၀င်ပိုင်း တူးဖော်နေမှု၊ ကွန်ကရစ်လိုင်နင်လောင်းရန် သံချီ သံကွေး သံမဏိပုံစံ Frame များ တပ်ဆင်နေမှု၊ ရေယူဥမင်လိုဏ်အတွင်း မြေသား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်နေမှုကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
အဆိုပါ ကွန်းချောင်းစီမံကိန်းသည် စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၆၀ ရှိပြီး ယခုအခါ စီမံကိန်း တစ်ခုလုံး ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီးသည် ရဲနွယ် ရေလှောင်တမံနှင့် ရဲနွယ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ရောက်ရှိကာ တမံအတွင်း ရေ၀င်ရောက်မှုနှင့် ရေသိုလှောင်မှု လက်ကျန်ပမာဏကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး စက်ရုံအတွင်း ထိန်းချုပ်ခန်း၌ ဓာတ်အားပေးစက်နှစ်လုံး မောင်းနှင်နေမှုကိုလည်းကောင်း၊ Switch Yard သို့ရောက်ရှိပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ် ပို့လွှတ်နေမှုကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ အဆိုပါ ရဲနွယ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် စက်တပ်ဆင်အား ၂၅ မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် လျှပ်စစ်ကီလိုဝပ်နာရီ သန်းပေါင်း ၁၂၃ သန်း ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Comments Off on ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| ကွန်း (Kun), ရဲနွယ် (Yenwe)	| Permalink
Minister for Electric Power No-1 inspects Kon Creek Hydropower Project
(Nay Pyi Taw, 27 Dec, 2008)
Minister for Electric Power No-1 Col Zaw Min visited Kon Creek Hydropower Project being imple-mented by Construction-3 of Hydro Power Department, on Kon Creek, about nine miles west of Pyu Township, Bago Division on 25 December.
The minister inspected earth work, quality control work, con-struction of spillways and afflux dam.
The minister inspected digging of the entrance of the intake tunnel, installation of frames for laying concrete and retaining of earth in the tunnel and preparation for construction of power station.
The 60-megawatt project is 70 per cent complete. The minister went to Yenwe Dam and power station and inspected storage of water, running of generators in the control room and switch yard and power distribution.
The 25-megawatt Yenwe power station generates 123 million kilowatt hours annually.
Comments Off on Minister for Electric Power No-1 inspects Kon Creek Hydropower Project	| ကွန်း (Kun)	| Permalink
(နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် စက်တင်ဘာ (၁၂)ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း၊ ဖြူးမြို့၊ အနောက်တောင်ဘက် ကိုးမိုင်ခန့်အကွာ ကွန်းချောင်းပေါ်၌ အမှတ်(၃) တည်ဆောက်ရေးမှ တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ကွန်းချောင်း ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံမြေနေရာ မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်ပြီးစီးမှု၊ ရေထိန်းဆည် EL-147m ထိ ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းပြီးစီးမှု၊ ပင်မတမံ EL-151.5 m အထိ တမံဖို့နေမှု၊ ရေပိုလွှဲ Spillway တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု၊ ရေထိန်းမျှော်စင် တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရေယူအဆောက်အအုံ Power Intake ရှိ သံထည်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်နေမှုတို့ကို ကြည်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ယခုအခါ ကွန်းချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ၆၉ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းပြီးစီးပါက စက်တပ်ဆင်အင်အားမဂ္ဂါဝပ် ၆၀ မှ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၁၉၀ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
Comments Off on ကွန်းချောင်း ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း ကြည်ရှုစစ်ဆေး	| ကွန်း (Kun)	| Permalink
You are currently browsing the archives for the ကွန်း (Kun) category.